"Ingabe kukhona emhlabeni ngemsebenti ukwethembeka?" - wabhala uBoris Pasternak. Yebo, okuningi, kodwa ngamunye - nezakhe. Ezinye alungele ukukhonza ngokwethembeka Motherland, elinye - uthando, nabanye - osikweleta. Noma kunjalo, umlobi omkhulu Russian Pasternak babekholelwa ukuthi izinto ezinjalo empeleni encane kakhulu, futhi inikeza inguqulo ayo - ukungafi, noma okunye - ". Elinye igama wokuphila, kancane sithuthukiswe" Ngokungangabazeki, ulwazi olujulile. Kodwa ngeke, siyakujabulela ukumemezela kwabanye omkhulu kulelo zwe? Caphuna mayelana ukwethembeka - protagonist kwalesi sihloko.
Kuyini lokhu? Ngokwe silulumagama zefilosofi, okungukuthi amazwi Cicero, ukwethembeka kulingana ubulungiswa, ngamanye amagama - e izibopho azithathele kumele babe neqiniso. Isazi sokusebenza kwengqondo Soviet sefilosofi Brudnyy A. A. ahlinzekwe ngaphansi lo mqondo ukuqonda komphakathi waqinisekisa ithemba obonakaliswe ekuzinikeleni. I sokuzinikela Psychology umndeni - lena isimo main ukuze kulondolozwe ukuzinza emshadweni. Ngokuphathelene Psychology bezempi nabezombusazwe enye ukuphangwa ngalesi mqondo libhekisela ngempela imfuneko ukuze umuntu ngamunye, okungase liqinisekisiwe futhi kusekelwa isenzo ongokomfanekiso - ngokuthatha isifungo. Lapha akubonisayo iphethini owamangaza abantu: ukubaluleka ukwethembeka kuncike degree of ingozi.
Kodwa lokhu okungukuthi zonke kukhona of abacabangayo lososayensi: okunengqondo, ngokuqondile, ngaphandle ezingadingekile kwehliswa kwelizinga. Ababhali kanye izimbongi acabange ngokuhlukile - elikhanyayo, ezicacile, usikhumbula kahle. Ngakho uzilalele, siyakwamukela ku ucaphune mayelana ukwethembeka!
Fidelity nge uphawu futhi uphawu lokususa
Ngokuvamile, lucebe iyunithi "zibonise ukwethembeka" lisetshenziswa ngomqondo omuhle. Kodwa ake baqonde: ingabe kuhle "abathembekile" Ubuhle ngempela? Quote sokwethembeka ngempela ukusiza.
Umlobi oyiNgisi Oskar Uayld efake isifiso ukuba azungeze eyodwa nowesifazane indoda ilandelana ne ukucobeka yomkhuba, ukungabi umcabango nokuvusa induku. Wangichazela iqiniso lokuthi abantu injabulo enkulu ngabe aphonswe kakhulu, uma kukhona novalo lokuthi omunye angalandeli futhi isiqiniseko eyolanda isikebhe sizinze kulahliwe. Nasi ekungabazeni izisusa zabanye, akunjalo? Ngakolunye uhlangothi - yebo, kodwa ngakolunye - akukho, futhi nakhu ukuthi kungani.
Kaningi, ukwethembeka isetshenziswa njengophawu isizinda qwa ukwakha isithombe esihle: "Mina ngiyindlela othembekile, ethembekile - ngiqonde uthando," "I am izibophezele lokhokho - ngakho ngingumuntu Patriot," njll Kungaba njengoba ukuzikhohlisa, ukuziphatha equlekile, futhi ngempela .. ngamabomu, ukwenze ngenhloso yokufihla essence yabo yangempela. Pascal Bruckner - umbhali French - Zimbili izinhlobo ukwethembeka - ngenxa ukufaneleka nokuqiniseka kwangaphakathi.
Futhi umbhali American Terri Gudkaynd uthe nomuzwa ojulile liphenduka isifiso ezivamile, uma kuphela ukugcwalisa izidingo zabo zobugovu. Mhlawumbe yingakho Paolo Koelo inikeza njalo, kuzo zonke izimo, sizibuze umbuzo, yini ukwethembeka, futhi kungaba okwamanje Isifiso sokuba nezinto umzimba nomphefumulo, esingasoze ongenawo ...
Izilinganiso nobuqotho nothando
Nokho, lapho ufunda eqanjiwe, ezisobala kuba esibophweni sothando esingenakunqamuka nokwethembeka. Frederic Beigbeder owake wathi uthando kufana umculo, okuyinto yena, kwenza kube zokuhambisana zemvelo. Budebuduze emva kwakhe, noma kunalokho, izinyathelo phambili futhi Cicero, ababekholelwa ukuthi intsha ukukala uthando ngamandla nogqozi. Kodwa besebasha, ukuzikhohlisa, yini ukuthatha nabo? Ngulapho-ke bayawukwati Bayaqaphela ukuthi uthando kukalwa nesifiso salo ethembekile futhi eqotho.
Yebo, ukuba sibe qotho othandweni akulula, futhi ngisho ezihlukahlukene ukuhlola lapha endleleni womusa. emsebenzini omkhulu kunayo yonke is nsuku zonke bathola ezingalindelekile ukuthi umuntu owenza e umphefumulo wakhe, futhi inhliziyo kwenye. Okutholakele kukhona ngaso sonke isikhathi. Ubufakazi lokhu - eyodwa ngaphezulu ikhotheshini mayelana ukuthembeka ngokuhlala Zhorzh Sand. Wabhala ukuthi kumelwe sicele uNkulunkulu ukuba asinike ukuphila okuphakade kanye nalabo esibathandayo njengoba umvuzo ngokwethembeka kwakhe futhi ukungaguquguquki ngamafuphi ukuphila liyashabalala yethu.
Ngokungangabazeki, ucaphuna mayelana ukwethembeka nokuzinikela - fund yangempela yegolide ngokuhlakanipha. Kodwa Ngifuna ukuphetha amazwi Osho athi: "kumelwe bathembeke ezinhliziyweni ezimbili. Akazange asho okudingeka ukuyibeka ngamazwi ngoba amagama esingayibeka ngawo - ngakho desecrate ke. Kufanele ibe ukuzinikela buthule, ubunye okuphelele inhliziyo omunye komunye, ukuzinikela ngokugcwele nelilodwa kwenye. Kumelwe kuqondwe, hhayi ukuba ngimemezele. "
Ungubani lona wesifazane, futhi kanjani yena abe?
Kungani ithebhulethi akakuboni USB flash drive?
Iris Khusainova: Biography nemisebenzi
Fashion tights ngemigwalo
Rainbow unkulunkulukazi eGreece yasendulo, ngokuvumelana izinganekwane. Ubani amaGreki asendulo ngokuthi unkulunkulukazi rainbow?
Kuzuzisa Mirena Kuvunguza
Electric JIG Bosch: izici ukukhetha
Penda ngoba zihlale zifudumele: izici kanye nokubuyekezwa abakhiqizi